I-Nice Studio 101 @ Downtown Cabo, 7min ukusuka ogwini - I-Airbnb
I-Nice Studio 101 @ Downtown Cabo, 7min ukusuka ogwini
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Enrique
I-Cozy Private Room 101 enokugeza kwangasese eCabo Downtown. Amabhulokhi ama-5 kuphela ukusuka e-marina nasedolobheni (imizuzu emi-5 ukuhamba), imizuzu eyi-7 nje uhamba usuka ogwini. Indawo engcono kakhulu edolobheni yamaholide noma umsebenzi! Igumbi lakhelwe ngokukhethekile isivakashi se-Airbnb!
Igumbi elizimele elinegumbi lokugezela enkabeni yeCabo amabhulokhi angu-5 nje ukusuka e-marina nasedolobheni (imizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo). Imizuzu engu-7 nje uhamba ukusuka ogwini. Igumbi lenzelwe izivakashi ngokukhethekile! Indawo engcono kakhulu yamaholide akho noma umsebenzi!
Igumbi lethu langasese / isitudiyo lihle kakhulu ezivakashini ezi-1 noma ezi-2. Ngokugeza kwangasese kanye nokungena okuzimele. Kufana nesipiliyoni esincane sehhotela!
Sinenye yezindawo ezinhle kakhulu eLos Cabos. Amabhulokhi angu-5 nje (imizuzu emi-5 uhamba ngezinyawo) ukuya e-avenue enkulu nase-Puerto Paraiso Mall. Sinendawo eluhlaza ongayisebenzisa ukuze uyifunde noma uphumule isikhashana. Yindawo yomndeni futhi sizozama ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kakhulu!
Igumbi lethu langasese / Isitudiyo silungele abantu aba-1 noma aba-2. Inendlu yokugezela yangasese kanye nendawo yokungena ehlukile. Kuyinto efana nehhotela elincane!
4.72 · 133 okushiwo abanye
Le ndawo ithule kakhulu, ikhanya futhi igcwele abantu abaningi. Ngeke ube nezinkinga mayelana nokuphepha!
Indawo ithule kakhulu, ikhanya futhi igcwele abantu abaningi. Ngeke ube nenkinga mayelana nezokuphepha!
Sizotholakala ukuze sikusize ngaso sonke isikhathi. Sihlala efulethini elingenhla ngakho sizoba nawe uma ulidinga :)
Sizohlale sibheke ukukusiza ngaso sonke isikhathi. Sihlala efulethini elingenhla ngakho sizoba nawe uma ulidinga :)